filazantsaramada – Page 2 – Just another WordPress.com site
VOASORATRA ANY AN-DANITRA
Perikopa: Lioka 10:17-20
«Indro, efa nomeko fahefana hanitsaka menarana sy maingoka sy handresy ny hery rehetra ananan’ny fahavalo hianareo, ka tsy hisy hampaninona anareo akory. Kanefa aza mifaly hianareo, satria manaiky anareo ny fanahy; fa mifalia, satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo.» Lioka 10:19-20)
Misy tolona tsy maintsy atrehin’ny mpino: tsy mitolona amin’ny nofo aman-drà fa amin’ny fanapahana sy amin’ny fanjakana sy amin’ny mpanjakan’izao faha maizinana izao dia amin’ny fanahy ratsy eny amin’ny rivotra. Niatrika izany tolona izany ny Zanaka dia i Jesosy ary nandresy. Ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan’Andriamanitsika, ary ny fahefan’ny Kristiny, satria nazera ilay mpiampanga ny rahalahintsika. Ary izy ireo naharesy azy noho ny amin’ny ran’ny Zanak’ondry sy ny teny filazàna Azy. Ny finoantsika an’i Jesosy, eny, ny anaran’i Jesosy no aneken’ny fanahy ny mino. « Na dia ny demonia aza dia nanaiky anay noho ny anaranao» (Lioka 10:17b). Noho ny finoana ny Anaran’i Jesosy dia handresy ny hery rehetra ananan’ny fahavalo ny Mpino. Ny fandresena ny fahavalo eo ihany fa ny fanoratan’ny Tompo ny anarana any an-danitra no tena Zavatra Lehibe indrindra. Aoka ary horaisintsika ny fandresena atolotry ny Tompo antsika dia tsy hamono ny anarantsika eo amin’ny bokin’ny fiainana Izy. Amen. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao
Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia manorata etsy ambany na antsoy ny Feon’ny Filaza tsara. Misaotra indrindra.
Publié parfilazantsaramada février 19, 2021 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur VOASORATRA ANY AN-DANITRA
Ny anarany ataonao hoe Jesosy.
Perikopa: (Jaona 1:29-34)
« …Fa Izy no hamonjy ny olony ho afaka amin’ny fahotany. » (Matio 1:21b)
Jesosy, Andriamanitra hamonjy ny olony (voambolana fampiasa amin’i Jehovah sy ny Isiraely). Indro ny Zanak’ondrin’Andriamanitra Izay manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao. Ny fahotana dia mampahory ny olona, mampiraviravy tanana. Manalemy ny lohalika. Mampahareraka ny fo. Na izany aza Jehovah dia mitondra famaliana: Izy no ho avy hamonjy. Hampahiratina ny mason’ny jamba. Hampahaladiana ny sofin’ny marenina. Hitsambikina ny mandringa. Hihoby ny moana! Hiboiboika any an-efitra ny rano. Misy fiantraikany tsara hatramin’ny tontolo hiainana ny fanesoran’i Jesosy ny fahotàna. Raha mba mahatsiaro ny tenanao hianao, mba ilainao ve izany rehetra izany? Atolory an’i Jesosy ary ny fahotanao rehetra. Hoy ny teny hoe: «Izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy azy no hahazo famindram-po» (Ohabolana 28:13). Hoy ny epistily (1Jaona1:1-9) «Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin’ny tsy fahamarinana rehetra.» Aoka isika hanetri-tena sy hifona amin’Andriamanitra noho ny fahotantsika. Indro ny Zanak’ondrin’Andriamanitra Izay manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao. Ekeo Izy. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao
FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél: 034 91 435 00 / E-mail : lhmmada@gmail.com Facebook: Feon’ny Filazantsara
Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia manorata eto ambany. Misaotra indrindra tompoko.
Publié parfilazantsaramada février 15, 2021 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Ny anarany ataonao hoe Jesosy.
Perikopa: (Matio 25:14-30)
«Fa izay rehetra manana dia homena, ka hanam-be izy; fa izay tsy manana kosa, na dia izay ananany aza dia halaina aminy. » (Matio 25:29)
Nisy fanoharana nataon’i Jesosy. Lehilahy miantso ny mpanompony, dia nanolotra azy ny fananany. Samy manana ny toetrany ny olona antsoina. Misy ny mahatoky raha nomena andraikitra. Mahazo sitraka avy amin’ny Tompony izany. « Tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky; nahatoky tamin’ny kely hianao, dia hotendreko ho mpanapaka ny be; midira amin’ny fifalian’ny tomponao » (Matio 25:23). Misy ny mpanompo ratsy. Ratsy saina: manome tsiny ny Tompony. Tsy mankasitraka ny ataon’ny Tompony izay manome azy andraikitra sy fahatokisana amin’ny fananany. « Ry mpanompo ratsy sady malaina… tokony ho nampanàna ny volako tamin’ny mpanàna vola hianao, ka raha tonga aho, dia ho nandray ny ahy mban-janany. » (MAtio 25:26,27). Zava-dehibe ny fifidianan’ny Tompo antsika. Aoka tsy atao kitoatoa izany fa hitondra any amin’ny fahaverezana mandrakizay. « Ario any amin’ny maizina any ivelany ny mpanompo tsy mahasoa any no hisy ny fotomaniana sy ny fikotroha-nify » (Matio 25:30). Aoka hibebaka isika sy handray tsara ny fahatokisan’ny Tompo antsika. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao
FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél: 034 91 435 00 / E-mail : lhmmada@gmail.com / Facebook: Feon’ny Filazantsara /
Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia azonao atao ny manoratra eo ambany. Misaotra indrindra tompoko.
«Ary rehefa tonga teo Jesosy, dia niandrandra ka nanao taminy hoe: Ry Zakaiosy, midina faingana; fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao Aho anio…Fa efa tonga ny Zanak’olona hitady sy hamonjy ny very.» (Lioka19:5,10)
Betsaka ny mamatotra an’i Zakaiosy satria lehiben’ny mpamory hetra izy no sady nanan-karena. Naniry hahita an’i Jesosy anefa izy. Tsy mora ho azy ny hahita an’i Jesosy satria be dia be ny olona, izy anefa fohy. Nafoiny ny zavatra rehetra rehefa tapa-kevitra fa hitady an’i Jesosy izy. Nitady vaha olana Zakaiosy. Nihazakazaka nialoha izy fa fantany fa handalo Jesosy, nananika hazo izy. Valiny: Rehefa tonga teo Jesosy dia niandrandra nijery azy. Niteny taminy hoe: Midina faingana, tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao Aho anio. Mety maro ny zavatra mamatotra anao amin’ity tany ity. Fahafinaretana, vola, harena….Fa raha vonona hitady marina an’i Jesosy ianao ka handao ireo fatorana ireo dia ho hitany tokoa ary hian-trano ao aminao Izy na inona na inona no ao. Hoy Zakaiosy: Raha misy zavatr’olona nalaiko tamin’ny fanambakana, dia onerako avy efatra heny izany. Nibebaka Izy. Ry havana. Tsy hian-trano ao aminao fotsiny Jesosy fa raha miala amin’ny ratsy fanaonao ianao dia hoy Jesosy amin’ny tokan-tranonao: « Anio no tonga eto amin’ity trano ity ny famonjena. » Aza avela handalo ny famonjen’i Jesosy Kristy ny tokan-tranonao. Eny na dia helo aza izany tokan-tranonao izany ankehitriny dia hoy Jesosy: Anio no ho tonga eto amin’ity trano ity ny famonjena. Aza mamoifo ry havana. Izay lazainy dia hainy atao. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao
FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél: 034 91 435 00 / E-mail: lhmmada@gmail.com / Facebook: Feon’ny Filazantsara
Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia manasa anao hanoratra ho an’ny Feon’ny Filazantsara. Misaotra indrindra tompoko.
Perikopa/ Marka 10:13-16
«Ary nisy nitondra zazakely ho eo aminy mba hametrahany tànana; fa ny mpianany niteny mafy ireny. Nefa tezitra Jesosy, raha nahita izany, ka hoy Izy taminy: Avelao ny zaza hanatona Ahy, ary aza rarana; fa an’ny toa azy ny fanjakan’Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa: Na zovy na zovy no tsy handray ny fanjakan’Andriamanitra tahaka ny zaza, dia tsy ho tafiditra aminy akory. Ary nitrotro azy Izy, dia nametra-tànana taminy ka nitso-drano azy.»
Jesosy Kristy no fototry ny fitaizàna: Nisy nitondra zazalely teo amin’i Jesosy mba hametrahany tànana. Mihoatra noho ny fanaterana zaza hianatra any amin’ny garabola no tokony hitondràna ny zaza eo amin’i Jesosy Kristy. Efa fanekena atao eo amin’ny fanaovana batisa ny zaza izany. Mba hametrahany tànana. Any amin’ny filazantsara hafa dia ny hoe mba ho « tendreny » ary ao amin’ny Marka16 dia fahefàna nomen’i Jesosy ny mino Azy io: « hametra-tànana amin’ny marary izy dia ho sitrana ireny ». Fomba fitaizàna hafa kely izao fitaizana izao. Nitrotro ny zaza Jesosy, dia nametra-tànana taminy ka nitso-drano azy. Ny fitrotrona dia fihetsika fanehoam-mpitiavana (calin) izay miteraka fahatokiana ao amin’ny zaza. Fiarovana amin’ny loza maro samy hafa eo amin’ny tany. Akaiky ny fon’ny mitrotro. Ny fametrahan-tànana dia fanasitranana sy famindrana aina ary fanomezana hery. Ny mitso-drano kosa dia teny naloaky ny vavan’i Jesosy. Toy ny sakafo mahavelona. «Tsy ny mofo hiany no hiveloman’ny olona fa ny teny naloaky ny vavan’Andriamanitra» (Matio 4:4b). Tsy mahita maso an’i Jesosy isika hitondràna ny zaza: sambatra kosa anefa izay tsy nahita nefa mino. Ento eo amin’i Jesosy isan’andro ny zaza. Hianao izay mino (ray sy reny mino) no tànan’i Jesosy hametra-tànana aminy. Fitaizana mahomby tokoa izany noho ny mibedibedy làva. Eny tokoa, na dia efa olon-dehibe na dia efa fotsivolo aza hianao dia maneke ho trotroin’i Jesosy. Maneke hametrahany tànana. Maneke omeny tso-drano. Raiso ary izao fomba fitaizana hafa-kely izao ho fomba fitaizanao ny ankohonanao amin’ity taona vaovao 2021 ity. « Andramo ka izahao fa tsara Jehovah, sambatra izay olona mialoka aminy » (Salamo 34:8). Jesosy Kristy Tompo mampahery anao
FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél: 22 210 42/034 20 635 53/033 15 635 53/032 54 635 53 E-mail: lhmmada@gmail.com Facebook: Feon’ny Filazantsara
Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia aza misalasala manoratra. Misaotra indrindra.
TERAKA AO AM-PONAO
Perikopa: Lioka 2:1-14
«Ary hoy ny anjely taminy: Aza matahotra; fa, indro, milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe izany ho an’ny olona rehetra;» (Lioka 2:10)
Tanteraka eto ny faminaniana nataon’I Isaia mpaminany: ny virijiny hanana anaka ka ny Anarany dia hataony hoe Imanoela (amintsika Andriamanitra). Niandrandra famonjena tokoa ny Jiosy teo ambany fanjanahan-tany ary nanana anaka Maria virijiny. Tamin’izany fotoana izany no nitenenan’ny anjely hoe: « Fa Mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan’i Davida, dia Kristy Tompo. » Tsy teny soa maha faly ho an’ny jiosy ihany anefa fa « fifaliana ho an’ny olona rehetra ». Zanaka Lahitokan’Andriamanitra hanala amin’ny fahaverezana mandrakizay izay ho an’izay rehetra mino Azy Fahatongavana ho zanak’Andriamanitra na fananganana anaka ataon’Andriamanitra amin’izay mino ny Zanaka lahitokana. Famonjena hafakely, mamaim-poana… fa finoana ny Zanaka no takiana amintsika. Teny Soa mahafaly ho ahy sy hianao. Fa Mpamonjy no teraka anio. Raiso ao amponao Jesosy Kristy Tompo anio. Izao ankehitriny izao midira ato ampoko Jesosy Kristy o. Amen!
FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél: 22 210 42/034 20 635 53/032 54 635 53/033 15 635 53 E-mail :lhmmada@gmail.com Facebook: Feon’nyFilazantsara
Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia manorata amin’ny Feon’ny Filazantsara. Misaotra indrindra.
Publié parfilazantsaramada décembre 26, 2020 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur TERAKA AO AM-PONAO
MANAMBARA MARINA AN’I JESOSY
Perikopa: Jaona 5:31-39
«Fa Izaho kosa manana fanambarana lehibe noho Jaona; fa ny asa nomen’ny Ray Ahy hovitaiko, dia izany asa ataoko izany no manambara Ahy fa nirahin’ny Ray. Ary ny Ray Izay naniraka Ahy, Izy no nanambara Ahy. Tsy mba renareo ny feony, na hitanareo akory aza ny endriny,» (Jaona 5:36-37)
Jesosy no miteny eto. Miresaka ny amin’ny fanambarana Izy. Teo amin’ny raika ambin’ny folo no miverina eto ny teny hoe: « ambara » (foto-teny io) fanambarana, manambara….Raha ny tenin’i Jesosy eto dia ny Ray no tena manambara na tompon’ny fanambarana. Na Jaona na Jesosy dia samy iraka. I Jaona dia manambara an’i Jesosy. Marina ny fanambarany Ahy hoy Jesosy. Jesosy tsy mandray fanambarana avy amin’ny olombelona. Zavatra kendren’ny fanambarana dia ny hoe: mba ho voavonjy hianareo. Io no Filazan-tsara. Mila mitandrina isika ny amin’ny fanambarana raisintsika. Fanambarana avy amin’ny olombelona sa fanambarana avy amin’Andriamanitra. Nahafinaritra ny fanazavàn’i Jaona satria marina ny fanambarany an’i Jesosy. Manao ahoana ny fanambarantsika an’i Jesosy? Mba manambara an’i Jesosy ve ny asa ataontsika? Manambara fiainana sa fahafatesana? Aoka ho raisintsika ny fanambarana ataon’i Jesosy dia ho voavonjy isika. Amen! Jesosy Kristy Tompo mampahery anao
Publié parfilazantsaramada décembre 18, 2020 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MANAMBARA MARINA AN’I JESOSY
NY BATISAN’NY FIBEBAHANA
Perikopa Lioka 3:1-6
«Ary ny nofo rehetra hahita ny famonjen’Andriamanitra » (Lioka 3:6)
Ny rivotra nitsoka tamin’ny fotoana niainan’i Jaona mpanao batisa sy Jesosy dia ny fiainana teo ambany fitondrana romana sy helenista. Nisy ny tsindry sy ny tebiteby. Teo amin’izany zava-nisy izany indrindra no tonga tamin’i Jaona tany an’efitra ny tenin’ Andriamanitra. Faminaniana ny ao amin’ny bokin’Isaia no tonga « Amboary ny làlan’i Jehovah, ataovy mahitsy ny làlankalehany…. » Ary indrindra « ny nofo rehetra hahita ny famonjen’Andriamanitra. ». Nitory ny batisan’ny fibebahana i Jaona. Ny fibebahana no manamboatra ny ao anatin’ny fon’ny olona handray ny famonjen’Andriamanitra. Ny avonavona no Tendrombohitra sy havoana haetry ary ny faharatsiana (fijangajangana, halatra, vono olona, fahamamoana…) no meloka hahitsy. Ny famoizam-po, ny fahantrana ara-panahy …. no lohasaha hototofana. Hoy ny teny avy amin’i Jesosy: « Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina, Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin’ny tsy fahamarinana rehetra. » (1Jaona 1:9). Te ho afaka amin’ireo faharatsiana rehetra voatanisa eo aloha rehetra ireo ve hianao? Ary indrindra te hahita ny famonjen’Andriamanitra? Jaona mpanao Batisa dia mpialoha làlana an’i Jesosy. Rehefa nahitsiny ny làlana ao am-ponao dia raiso Jesosy hiditra ao! Fa raha tsyJesosy no raisinao dia i Satana indray no hiverina ao. Ekeo eo anatrehany ireo fahotanao rehetra ka raiso Jesosy hanadio anao. Raha mibebaka ka mandray an’i Jesosy hianao (mila avaozina isan’andro ny fandraisana Azy) dia ho hitanao tokoa ny Famonjeny. Ho hitanao anie ny famonjena! Amen.
FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél:/22 210 42/034 20 635 53/032 54 635 53/033 15 635 53/ E-mail : lhmmada@gmail.com Facebook: Feon’ny Filazantsara
Publié parfilazantsaramada décembre 14, 2020 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY BATISAN’NY FIBEBAHANA
« Fa tsy fantantsika izay vavaka tokony ataontsika; fa ny Fanahy no mifona ho antsika amin’ny fitarainana tsy azo tononina. » (Romana 8:26)
Raha mamaky ny Soratra Masina isika dia mbola ny Fanahy no manambara amintsika izay tena tiany ambara. Raha ny maha olombelona antsika dia tsy mahatakatra ny saindalin’Andriamanitra isika, ary raha izany dia tsy haintsika koa izay tokony hifonantsika amin’Andriamanitra, ary raha fantatsika aza fa diso isika dia tsy haintsika ny manambara izany amin’Andriamanitra raha tsy ny Fanahy ihany. Mampanetritena antsika izany, satria mila ny Fanahy izay mampahafantatra antsika ny fahadisoana tokony hifonantsika isika, ary ny fomba entintsika manambara izany amin’ny Ray dia tsy haintsika fa ny fanahy no mahay milaza izany. Aoka isika hazoto hanome mandrakariva ny Fanahy ny toerana sahaza ho Azy ao anatintsika isananadro. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao
Publié parfilazantsaramada novembre 27, 2020 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY AO AMIN’I KRISTY JESOSY
MAHAFOIZA IZAY ANANANAO REHETRA
« …tamin’ny alahelony no nandatsahany tao izay rehetra nananany, dia ny fivelomany rehetra. » (Marka 12:44b)
Omeo an’Andriamanitra izay an’Andriamanitra ary an’i Kaisara izay an’i Kaisara. Tenin’I Jesosy izany : «Dia hoy Jesosy taminy: Aloavy ho an’i Kaisara ary izay an’i Kaisara, ary ho an’Andriamanitra izay an’Andriamanitra.» (Lioka 20:25). Amin’ny andro izay omen’ny Tompo anao dia mahaiza mahafoy fotoana ‘Mivavaka’ ho an’ny olona rehetra eny fa na dia hatramin’ny mpitondra anao aza. Manana adidy isika amin’ny maha kristiana antsika amin’ny fitiavana an’Andriamanitra mba hahafoy. Rakitra lehibe ataonao izany. Aseho miharihary eto ary fa Jesosy dia mandinika ny amin’ny fandatsahana rakitra. Mandinika ny amin’ny fahafoizanao, eny fa na dia ny fahafoizantenanao aza. Tiava an’i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra, ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra fa ho hainao izany. Ny Zanany lahitokana Jesosy Kristy no nafoiny ho faty hisolo antsika. Inona no mba atolotrao ho Azy? Ny tananao hiasa ho Azy Ny tongotrao hanaiky hirahiny. Ny volanao… ny andronao… eny Azy daholo ihany anie ireny eh fa nampindraminy anao. « Tamin’ny alahelony no nandatsahany tao izay rehetra nananany, dia ny fivelomany rehetra. » Jesosy Kristy Tompo mampahery anao
FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél: 22 210 42/ 034 20 635 53/ 032 54 635 53/ 033 15 635 53/ E-mail: lhmmada@gmail.com Facebook: Feon’ny Filazantsara
Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia aza misalasala manoratra. Misaotra indrindra tompoko.
Publié parfilazantsaramada novembre 13, 2020 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MAHAFOIZA IZAY ANANANAO REHETRA
Articles plus récents 1 2 3 4 … 64 Articles plus anciens